महिलाले यदि पुरुषलाई जबरजस्ती गरे के त्यो बलात्कार हो ? | Ratopati
केट सिल्वर/ बीबीसी
जब कुनै पुरुषले महिलामाथि उनको मर्जीबिना जबरजस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित गर्छ भने त्यो बलात्कार हो तर यदि महिलाले पुरुषलाई उनको मर्जी बिना यस्तो गर्न बाध्य बनाए के त्यो पनि बलात्कार होइन र ?
इंगल्याण्ड र वेल्सको कानूनमा यो बलात्कार होइन तर यो घटनामाथि अध्ययन गर्ने एक लेखकले सायद यसलाई पनि बलात्कारको संज्ञा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छिन् ।
यसमा जबरजस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित भएको खण्डमा यसको परिणाम के हुन्छ र कानूनी कारवाही कस्तो हुन्छ भनेर विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।
जोन भन्छन्, ‘मेरी पार्टनर अफिसबाट घर आउनेबित्तिकै सेक्सको माग गर्न थालिन् । उनी हिंस्रक हुन थालिन् र स्थिती यहाँसम्म पुग्यो कि पार्टनर घर आउने कुरा सोचेरै म डराउन थालेँ ।’
यस्ता अनुभवको रिपोर्ट गर्न पुरुषलाई धेरैजसो लज्जाको महसुस हुन्छ । उनीहरु यौन शोषणबारे उल्लेख नगरिकनै घरेलु हिंसाको रिर्पाट गर्छन् ।
यसले पुरुषहरुको दिमागमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ, आत्महत्याको विचार आउन सक्छ र यौन क्षमतामा ह्रास आउँछ ।
केही पुरुषले पटक–पटक पीडित भएको कुरा गरे । केही वाल्यकालमा यौन शोषणबाट पीडित थिए, कतिले विभिन्न तरिकाले यौन हिंसा सहन गरे ।
वियरेको शोधमा एक मिथ यो पनि सार्वजनिक भएको छ कि पुरुषसँग जबरजस्ती सेक्स असम्भव छ किनभने पुरुष महिलाको तुलनामा शारीरिक रुपमा बलियो हुन्छन् ।
दोस्रो यो हो कि पुरुष महिलासँग सबै यौन अवसरलाई सकारात्मक मान्छन् ।